स्वीकृति बराल - कान्तिपुर समाचार
स्वीकृति बरालका लेखहरु :
अभिलेखालय (ई. सं.) २०२१२०२०२०१९२०१८२०१७२०१६२०१५२०१४
फाल्गुन १, २०७७
यो बाटोमा एकाबिहानैदेखि चहलपहल सुरु हुन्छ । सबै हतारोमा देखिन्छन् । यस्तो लाग्छ, बिहानको पर्खाइमा सारा मानिसले नसुतेरै रात बिताए । सायद सबैलाई कतै पुग्नु छ । बेलाबेला सोच्छु, यी सबैलाई जिन्दगीले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्‍याउला कि बीचमै अलपत्र पारेर छोड्ला !
श्रावण १७, २०७७
हातभरिको पैसा पटकपटक गन्दै छ ऊ । बेलाबेला सुँघ्दै पनि छ । ऊ आफ्नो मिहिनेतको बास्नामा रमाउँदै छ । महिनाभरिमा सबैभन्दा प्यारो लाग्ने दिन आज । तलब आएको दिन । ऊ सोच्छ- तलब थाप्ने दिन र काम गर्ने दिन फेरबदल भइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला ! आहा, एक दिन काम, तीस दिन तलब । आफ्नो सोचाइ देखेर दंग पर्छ ऊ ।
ऊ सिक्दै छ
असार ६, २०७७
ऊ बल्लतल्ल जग उचालेर हिँड्नै के लागेको थियो, अनियन्त्रित भयो । जग हातबाट फुत्कियो र पानी छताछुल्ल भयो । सिसाको जग फुटेको आवाजसँगै निक्लन थाले अन्य आवाज । एउटाले भन्यो, ‘नसक्नेले किन उठाउनुपर्थ्यो?’ अर्कोले भन्यो, ‘बढी जान्ने हुनुपर्छ यसलाई आजभोलि ।’ अझ अर्कोले थप्यो, ‘भनेको काम केही गर्नु छैन । खाली बिगार्ने मात्रै काम गर्छ ।’